लिम्वूवान - विविध सामग्री: लेखक बन्न चाहनेलाई 'टिप्स'
५. शासक वा रोलवाला शासकका 'बाहुली'बाट कृतिको विमोचन कदापि नगराउनू । तिनका 'बाहुली'बाट विमोचन गराउनुको अर्थ तिनका सन्दिग्ध छविको छायामा आपनो आत्महीन अनुहार देखाउन रहर गर्नु हो । यो लेखकको चाकरीमुखी, पराश्रयी र आत्मसमर्पणकारी प्रवृत्तिको द्योतक हो । गद्दीवाल शासक वा रोलवाला शासकका चरणमा साहित्यको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई घुँडा टेकाइँदा लेखकीय विवेक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हत्या हुन्छ । अनि, लेखकसँग लेख्नलाई के बाँकी रहन्छ ? सत्ताको अनालोचनात्मक निकटता र शासकप्रतिको नजानिँदो भक्तिले लेखकलाई चालै नपाई तिनको भजनमार्गी भाट बनाउँछ । एकबारको जुनिमा भाट लेखक बन्नु पनि के बन्नु ?
६. बेस्ट सेलर भनिने पुस्तक गुणवत्तामा बेस्ट नै हुन्छ भनी आँखा चिम्लेर नपत्याउनू । प्रायः यस्ता बेस्ट सेलरमा अतिरञ्जित विज्ञापन र व्यापारिक स्वार्थको मायावी लेप लगाइएका हुन्छन् । पाठकका हातमा पुग्ने माध्यम भए चित्ताकर्षक आवरण र सुन्दर मुद्रण भएको साहित्यको राम्रो पुस्तक धेरथोर अवश्यै बिक्छ । तर, केवल बिक्रीको सङ्ख्या पुस्तकको श्रेष्ठताको नापो होइन । अचेल प्रतिस्पर्धाको बजारमा आफ्नो मालमा आफ्नै हातले अब्बल दर्जाको छाप ठोक्ने अभिप्रायले मेरो यति र उति बिक्यो भनी कतिपय प्रकाशकले ढाँट्न थालेको छनक पाइन्छ । यस्ता ढाँटहरूको भ्रान्तिकारी छलबाट नबहकिनू ।
८. गनगन गर्न र रुन लेखक नबन्नू । मैले भाषा र साहित्यको उत्पात सेवा गरेँ, तर मजस्तो राष्ट्रको अनमोल मणिको उचित कदर भएन भनी गनगन गर्ने र रुनेहरूको यहाँ केही कमी छैन । कसैलाई पनि समाज वा राष्ट्रले भाषा-साहित्यको सेवावापत पछि मेवा टक्रयाउँला भनेर भर्ती गरेको हुँदैन । लेखक बन्नु स्वेच्छिक कर्म हो । व्यक्तिको नितान्त निजी रुचि र रोजाइको कुरा हो यो । गनगन र रोदनको बासी पथको पथिक हुनुभन्दा त बरु लेखक नहुनु नै बेस ।
Posted by limbu at 3:32 AM